Ukunquma kwe-Laser Cutter - MimoWork
Uhlome nge- Ikhamera ye-HD nekhamera ye-CCD, I-Contour Laser Cutter yakhelwe ukubona ukusika okuqondile okuqondile kwezinto eziphrintiwe nezenziwe ngephethini. Uhlelo lwethu lwe-smart vision laser lusiza ukuxazulula izinkinga zeukuqashelwa kwentaba okungenakuphikwa kwemibala efanayo yezinto, ukuma kwephethini, ukuguqulwa kwezinto ezibonakalayo kusukela ezishisayo udayi Sublimation.
Buka Zonke Abasiki be-Contour Laser
Amamodeli we-Contain Laser Cutter adume kakhulu
Contour Laser umsiki 90
I-Contain laser cutter 90 ifakwe Ikhamera ye-CCD yakhelwe ngokukhethekile ama-patches namalebula ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu nekhwalithi. Ikhamera enesinqumo esiphakeme nesoftware yekhamera eguquguqukayo inikela ngezindlela ezahlukahlukene zokuqashelwa kwezicelo ezahlukahlukene.
Contour Laser umsiki 160L
IContour Laser Cutter 160L ifakwe i-HD Camera phezulu engabona umugqa bese idlulisela idatha yokusika ku-laser ngqo. Kuyindlela elula yokusika yemikhiqizo yedayi Sublimation. Izinketho ezahlukahlukene zenzelwe kuphakheji yethu yesoftware esebenza ngokuhlukile ...